BREAKING NEWS-Somaliland oo Diidey in Laascaanood ay Ka Degto Diyaarad Sidey Gurmad Caafimaad & Dhaawacyo Naft Qalayso.
October 24, 2018 puntlandnews
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in diyaaradda Ocean Airline oo sidey gurmad caafimaad loo diidey inay ka degto garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood.
Duulimaadkaan aan caadiga ahayn ayaa waxaa saarnaa sida la sheegay dawooyin loogu talo galay dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Dhumay iyo in sidoo kale qorshe ah in la qaado qaarkood dhaawacyadii ku dhaawacmay dagaalkii Dhumay.
Xogta aanu helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in deeqdaas dawada ah ay dirtay dowladda federaalka Soomaaliya, balse diyaaradii siday loo diiday in ay ka dagto garoonka diyaaradaha ee magalada Laascaanood.
Horoogayaasha maamulka Somaliland ee gobolka Sool ayaa la sheegay inay bixiyeen amarka magaalada Laascaanood looga joojiyey shirkadda daawada sidey.
Qaar kamid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Dhumay ee gobolka Sool ayaa waxaa loo soo qaaday intooda badan Cisbitaalada waa weyn ee ku yaala magaalada Gaalkacyo iyo magaalooyinka Burco iyo Laascaanood si wax looga qabto xaaladooda caafimaad.